Kang Dong-won – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Peninsula – Train to Busan2(2020) Unicode ဒီရုပျရှငျမှာတော့ ကိုရီးယားကို နိုငျငံအားလုံးက ပိတျဆို့ထားခဲ့တာ ၄ နှဈကွာခဲ့ပါပွီ။ အထဲမှာ အသကျရှငျရကျကနျြခဲ့သူတှကေ လှတျမွောကျဖို့ ကွိုးစားနသေလို လောဘသားတှကေလညျး ပိုငျရှငျမဲ့နတေဲ့ ငှတှေေ ရတနာတှကေို ယူဖို့ ခိုးဝငျနကွေပါတယျ။ ကိုရီးယားနိုငျငံတဈခုတညျး ကမ်ဘာပကျြပွီးနောကျပိုငျး အခွအေနကေို ပွသလို ပွထားပွီး အရငျရုပျရှငျလိုပဲ Survival အတှကျ စှနျ့စားခနျးတှေ ဖှငျ့တာကို တှရေ့မှာပါပဲ။ အရငျက Train To Busanပထမပိုငျးအနနေဲ့ထှကျရှိထားပွီး လငျ့ကိုတော့ အောကျမှာထညျ့သှငျးဖျောပွပေးထားပါတယျ။ အခုကားကတော့အပိုငျး ၂ အနနေဲ့ထှကျရှိလာတာမို့ အားလုံးပဲခံစားကွညျ့ရှုပေးကွပါဦး။ Credit Review ဒီဇာတျကားကို ဘာသာပွနျပေးသူကတော့ YNN ဖွဈပါတယျ Zawgyi ဒီရုပ်ရှင်မှာတော့ ကိုရီးယားကို နိုင်ငံအားလုံးက ပိတ်ဆို့ထားခဲ့တာ ၄ နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီ။ အထဲမှာ အသက်ရှင်ရက်ကျန်ခဲ့သူတွေက လွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားနေသလို လောဘသားတွေကလည်း ပိုင်ရှင်မဲ့နေတဲ့ ငွေတွေ ရတနာတွေကို ယူဖို့ ခိုးဝင်နေကြပါတယ်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံတစ်ခုတည်း ကမ္ဘာပျက်ပြီးနောက်ပိုင်း အခြေအနေကို ပြသလို ပြထားပြီး အရင်ရုပ်ရှင်လိုပဲ Survival ...
A Violent Prosecutor (2016) Unicode Byun Jae Wook(Hwang Jun Min)ဟာ အစိုးရရှနေ့အေဖွဈလုပျကိုငျလာတာကွာပါပွီ... သူဟာဒေါသကွီးတယျစိတျမရှညျပွီးတော့ အလုပျကိုတိကလြုပျတတျတဲ့သူပါ...သူဟာအမှုစဈတဲ့အခါကွမျးတမျးပွီးအမွဲမှနျကနျတဲ့အတှကျကွောငျ့လညျးနာမညျကွီးတဲ့သူပါ.. တဈနမှေ့ာတော့သူစဈဆေးတာဝနျယူနရေတဲ့ပွဈမှုတဈခုရဲ့သင်ျကာမကငျးတဲ့သူဟာစဈဆေးနရေငျးရုတျတရကျသဆေုံးသှားပါတယျ... ဒါ့အပွငျသကျသတှေအေားလုံးကလညျးရှနေ့ေJae Wookကိုပဲညှနျပွနပေါတယျ...အဲ့လိုနဲ့ရှနေ့ေJae Wookဟာလူသတျသမားအဖွဈ သတျမှတျခံရပွီးထောငျဒဏျ(၁၅)နှဈမတရားကခြံခဲ့ရပါတယျ... သူဟာထောငျထဲမှာစစရောကျခွငျးသိပျမရငျးနှီးပမေယျ့မကွာခငျသူရဲ့အရငျရှနေ့အေလုပျအတှအေ့ကွုံတှနေဲ့ထောငျသားတှကေိုကူညီပေးပွီးထောငျသားတှခေဈြခငျလေးစားရဲ့အကိုကွီးဖွဈလာပါတော့တယျ...သူနတေဲ့ထောငျမှာ"ဆရာ"တဈဆူလိုအေးဆေးဖွဈလာပါတော့တယျ...၅နှဈအကွာမှာChi Won(Gang Dong won)ဟာလိမျလညျမှုနဲ့ထောငျထဲရောကျလာပါတော့တယျ....Chi Wonဟာရှနေ့ေJae Wookရဲ့ဖွဈကွောငျးကုနျစငျကိုလညျးသိထားတဲ့သူဖွဈပါတယျ...ဒီလိုနဲ့ရှနေ့ေJae Wookဟာသူ့ရဲ့မတရားခံရမှုကိုပွနျလညျလကျစားခခြေငျြလာပါတော့တယျ...Chi Wonတဈယောကျကတော့ထောငျထဲမှာပဲခနနခေဲ့ရပွီးအပွငျရောကျသှားတဲ့အခါရှနေ့ေJae Wookရဲ့လူယုံတျောတဈယောကျအနနေဲ့သူ့ကိုကူညီပွီးအမှနျတရားကိုရှာဖှပေေးပါတော့တယျ... ဒီလိုနဲ့ဘာတှဆေကျဖွဈလာမလဲ??ရှနေ့ေ့Jae Wookတဈယောကျသူမတရားခံရမှုအမှနျပျေါပေါကျပွီးထောငျထဲကလှတျလာမလား???ထောငျထဲရှနေ့ေJae Wookရဲ့အကူအညီနဲ့အပွငျကChi Wonတဈယောကျအကောငျးဆုံးလုပျနိုငျမလား?? စိတျဝငျစားစှာနဲ့ခံစားကွညျ့ရှုကွညျ့ကွပါနျော... Credit - Review Zawgyi Byun Jae Wook(Hwang Jun Min)ဟာ အစိုးရရှေ့နေအဖြစ်လုပ်ကိုင်လာတာကြာပါပြီ... သူဟာဒေါသကြီးတယ်စိတ်မရှည်ပြီးတော့ အလုပ်ကိုတိကျလုပ်တတ်တဲ့သူပါ...သူဟာအမှုစစ်တဲ့အခါကြမ်းတမ်းပြီးအမြဲမှန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းနာမည်ကြီးတဲ့သူပါ.. တစ်နေ့မှာတော့သူစစ်ဆေးတာဝန်ယူနေရတဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုရဲ့သင်္ကာမကင်းတဲ့သူဟာစစ်ဆေးနေရင်းရုတ်တရက်သေဆုံးသွားပါတယ်... ဒါ့အပြင်သက်သေတွေအားလုံးကလည်းရှေ့နေJae Wookကိုပဲညွှန်ပြနေပါတယ်...အဲ့လိုနဲ့ရှေ့နေJae Wookဟာလူသတ်သမားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပြီးထောင်ဒဏ်(၁၅)နှစ်မတရားကျခံခဲ့ရပါတယ်... သူဟာထောင်ထဲမှာစစရောက်ခြင်းသိပ်မရင်းနှီးပေမယ့်မကြာခင်သူရဲ့အရင်ရှေ့နေအလုပ်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ထောင်သားတွေကိုကူညီပေးပြီးထောင်သားတွေချစ်ခင်လေးစားရဲ့အကိုကြီးဖြစ်လာပါတော့တယ်...သူနေတဲ့ထောင်မှာ"ဆရာ"တစ်ဆူလိုအေးဆေးဖြစ်လာပါတော့တယ်...၅နှစ်အကြာမှာChi Won(Gang Dong won)ဟာလိမ်လည်မှုနဲ့ထောင်ထဲရောက်လာပါတော့တယ်....Chi Wonဟာရှေ့နေJae Wookရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုလည်းသိထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်...ဒီလိုနဲ့ရှေ့နေJae Wookဟာသူ့ရဲ့မတရားခံရမှုကိုပြန်လည်လက်စားချေချင်လာပါတော့တယ်...Chi Wonတစ်ယောက်ကတော့ထောင်ထဲမှာပဲခနနေခဲ့ရပြီးအပြင်ရောက်သွားတဲ့အခါရှေ့နေJae Wookရဲ့လူယုံတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့သူ့ကိုကူညီပြီးအမှန်တရားကိုရှာဖွေပေးပါတော့တယ်... ဒီလိုနဲ့ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ??ရှေ့နေ့Jae Wookတစ်ယောက်သူမတရားခံရမှုအမှန်ပေါ်ပေါက်ပြီးထောင်ထဲကလွတ်လာမလား???ထောင်ထဲရှေ့နေJae Wookရဲ့အကူအညီနဲ့အပြင်ကChi Wonတစ်ယောက်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မလား?? စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ခံစားကြည့်ရှုကြည့်ကြပါနော်... Credit - Review